Hay'ado ka socda Q M oo Galgaduud kulamo kula leh Masuuliyiinta Gobolkaas – SBC
Hay'ado ka socda Q M oo Galgaduud kulamo kula leh Masuuliyiinta Gobolkaas
Dhuusamareeb- Wafdigani ka socda Hay’adaha Qaramada Midoobay ayaa soo gaaray deegaano kala duwan oo ka tirsan gobolka Galgaduud, waxaana degmooyinka ay soo gaareen ka mid ah Degmada Caabudwaaq, Guriceel, Matabaan, iyo degmada xarunta u ah gobolka Galgaduud ee Dhuusamareeb.
Waxayna halkaasi kulamo kula yeesheen wafdigani saraakiisha Ahlusuna waljamaaca ee iyagu halkaasi ku sugan, waxaana kulamadaasi looga wada hadlay sidoo qaramada Midoobay ay door uga qaadan laheyd horumarinta iyo wax u qabashada bulshada tabaaleysan ee ku dhaqan deegaanada gobolka Galagduud .
Ma ahan markii ugu horeysay oo wafuud ka socda qaramada Midoobay ay soo gaaraan gobolka islamarkaana kulamo la yeeshaan saraakiisha culimaa udiinka Ahlusuna ee gobolkaasi ka arimiya, balse ma ahan inta badan sida ay u yimaadeen in ay wax uga qabtaan xaaladaha gobolka.
Masuuliyiintan ka socda qaramada midoobay ayaa sheegay in iminka taasi ay waxka bedeli doonaan islamarkaana talaabo horumarleh qaadaan si looga gudbo waxqabasho la’aanta .
Sikastaba ha ahaatee xaaladahan ayaa waxa ay ku soo aadayaan xili gobolka Galgaduud ay ka jiraan xiisado colaadeed oo maamulka gobolka ka arimiyaa waa ahlusunee uu kala dhexeeyo xarakada Alshabaab dagaal, ayna sidoo kale ka jiraan gobolka Abaaro saameyn ba’an reebay.